Ithegi: ukuthengisa ngentsholongwane | Martech Zone
Ithegi: ukuthengisa ngentsholongwane
UDave Balter, umsunguli weBzzAgent, wenza umsebenzi omkhulu ekuchazeni umahluko kwi-Buzz, Viral kunye neLizwi lokuThengisa ngomlomo kolu hlelo lweTshintshoLolu. Nazi izicatshulwa ezineenkcazo ezinkulu zikaDave: Yintoni iLizwi lokuThengisa ngomlomo? ILizwi lokuThengisa ngomlomo (WOMM) lelona xesha linamandla kwiplanethi. Ukwabelana okwenene koluvo malunga nemveliso okanye inkonzo phakathi kwabathengi ababini okanye ngaphezulu. Yinto eyenzekayo xa abantu beba
Ngokuthandwa kweendaba zosasazo, ndingathemba ukuba uninzi lwamashishini luhlalutya lonke iphulo abalenzayo kunye nethemba lokuba kwabelwane ngalo ngomlomo ukwandisa ukufikelela kwabo kunye namandla. Yintoni ukuthengisa ngentsholongwane? Ukuthengisa ngentsholongwane kubhekisa kubuchwephesha apho umxholo ubuchule bokuyila umxholo ohambisa ngokulula kwaye ubandakanyeka kakhulu ukuze kwabelwane ngawo ngokukhawuleza ngabantu abaninzi. Isithuthi licandelo eliphambili-
Isihloko sale infographic ngenene siSiseko seFomula yeSabelo esifanelekileyo seNtsholongwane. Ndiyayithanda i-infographic kodwa andinguye umlandeli wegama… kuqala, andikholelwa ukuba kukho ifomula. Okulandelayo, andikholelwa ukuba kukho isabelo esifanelekileyo. Ndiyakholelwa ukuba kukho indibaniselwano yezinto kunye neziganeko ezikhokelela kumxholo omkhulu owabelwayo. Eminye yayo ithamsanqa ngokucacileyo njengoko ingena ngaphambili ngasekunene
Emva kokubona izicwangciso ezininzi zentsholongwane zifa kunokuba zisinde, andiqinisekanga ukuba ndikholwa kakhulu ukuba kukho uhlobo lwe-algorithm yokuphumelela kwentsholongwane. Kuyinyani ukuba ezinye iiarhente zibhetele kakhulu kunezinye… kodwa andikholelwa ukuba nabani na angathembisa ngesicwangciso sentsholongwane… ngaphandle kokuba bazibhatala imali enkulu kunye namabhaso okuyixhasa. Oko kwathiwa, kukho iimpawu eziqhelekileyo kwizicwangciso zentsholongwane. Ekugqibeleni umxholo wentsholongwane kufuneka uvuse ezinye